Soomaali 48 Saacadood Katiinado Ku Xidhnaa Oo Maraykanka Dood Ka Dhaliyey | Dhamays Media Group
Soomaali 48 Saacadood Katiinado Ku Xidhnaa Oo Maraykanka Dood Ka Dhaliyey
USA (Dhamays) – Xubin ka tirsan golaha Aqalka Congress-ka Mareykanka ayaa dowladda ugu baaqay in ay baadho dhibaato la sheegay in loo geystay 92 qof oo Soomaali ah oo la doonayey in la Mastaafuriyo, laakiin Mastaafurintooda Fashilantay.
Keith Ellison, oo matala degmo ka tirsan gobolka Minnesota oo ay deggan yihiin Soomaalida ugu badan ee Mareykanka ku nool, wuxuu qoraal uu soo saaray ku sheegay in laanta socdaalka ay silsilado ku xidh-xidhay dadkii lasoo tarxiilay ee dib loogu celiyay Mareykanka.
Idaacadda Minnesota ee MPR ayaa ku warrantay in diyaaraddii dadkaasi siday ay duushay 7-dii December, balse ay dib ugu noqotay Miami, maalintii xigtay.
Waxay idaacaddu baahisay in duullimaadka uu qaatay 40 saacadood oo ay ka mid tahay 23 saacadood oo diyaaradda ay ku sugnayd caasimadda Senegal ee Dakar.
Warbixin ay maxkamad u gudbiyeen qareenada u doodaya Soomaalida xidhan, ayaa lagu sheegay in 92-da qof la garbo-duubay, gacmahooda iyo lugahana ay katiinado ku xidhnaayeen muddo 48 saacadood ah.
Mr Ellison wuxuu laanta socdaalka ka dalbaday in ay 48 saac gudahood kaga jawaabto su’aalo badan oo ay ka mid tahay, maxay diyaaradda ugu noqotay Mareykanka?
Laanta socdaalka waxay sheegtay in diyaaradda ay ku noqotay Mareykanka ka dib markii “ay heli wayday meel ay ku nastaan shaqaalaha sababo la xidhiidha xaalado ka dhashay hoteelkooda Dakar”, MPR ayaa sidaas ku warrantay.
Sidoo kale, waxay hay’addu beenisay eedaha ku saabsan tacaddiga, waxayna sheegtay in qofna aanu dhaawacmin intii uu duullimaadka socday. Waxay isku difaacday in bed-qabka 92-da qof ay ka shaqeynayeen shaqaalihii diyaaradda la socday.
Xeer ilaaliyaha wuxuu amray in kooxda, oo lagu hayo xabsi ku yaalla gobolka Florida, la siiyo daaweynta aasaasiga ah ee ay u baahan yihiin haddii uu wax dhaawac ah soo gaadhay,” idaacadda MPR ayaa sidaasi baahisay.
Previous: Jabuuti Oo Dalkeeda U Diidday DAB-CASSAR Iyo Halka Uu Hadda Ku Xidhan Yahay
Next: Deg-deg: Abwaan HADRAAWI Oo Ka Hadlay Warar Laga faafiyey Xaaladdiisa Caafimaadkiisa + DAAWO